နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူနဲ့အတူ - Yangon Nation News
စာရေးသူ၏ အတွေးအမြင်နဲ့ အယူအဆသာဖြစ်ပါတယ်၊
နိုင်ငံကြီးသားတစ်ယောက် လူကြီး လူကောင်းဆန်စွာ ရေးသားထားမူသာဖြစ်ပါတယ်၊ဆိုသည်ကို အရင်ဦးဆုံးအသိပေးတင်ပြပါရစေ ခင်ဗျာ၊
နိုင်ငံတော်သည် စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းပြည့်ဝသောပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးသည်၊
ဤ ပုဒ်မ (၇) အား ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်၊ ဖြည့်စွက်၊ ပယ်ဖျက်၊အသစ်ဖြည့်စွက်ရန်၊(၂၀၁၅) ရွေးချယ်ခံ နိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့အသီးသီးနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလတို့၏ လွှတ်တော်တွင်းအအကြံပြုချက်များကိုလည်းတင်ပြပါရစေ၊
နိုင်ငံတော်သည် စစ်မှန်သော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးသည်၊
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ၊ တအောင်း(ပလောင်) အမျိုးသားပါတီ၊
နိုင်ငံတော်သည် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျ င့်သုံးသည်၊
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ –
နိုင်ငံတော်သည် ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးသည်၊
ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီ –
ဟူ၍ သဘောထား အကြံပြု ထားကြတာကို တွေ့ရပါတယ်
၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၌ ရွေးချ ယ်ခံရသည်ဖြစ်စေ၊
မခံရသည်ဖြစ်စေ၊ ကော်မရှင်တွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသောနိုင်ငံရေးပါတီ ကြီးငယ် မရွေးတို့ထံ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး နဲ့သက်ဆိုင်သော အကြံပြု ချက်အားလုံးကို ပေးပို့ထားပြီး၊၎င်းတို့၏ အကြံပြုချက်၊ မှတ်ချက်သဘောထားများကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့
အလုပ် လုပ်ခြင်း၊မလုပ်ခြင်းက ၎င်းပါတီများနဲ့သာသက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်၊
ပြည်သူ ပြည်သားများ၏ထောက်ခံမူများမြင့်တက်လာစေဘို့ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာက သက်ဆိုင်ရာ ပါတီများ၏ အလုပ်နဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မူသာဖြစ်ပါတယ်၊
သဘောက မိမိတို့ပါတီ အနိုင်ရကာ အစိုးရဖွဲ့နိုင်ပါက တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လို ဘယ်ယ်ပုံနဲ့ သွားပါမယ်၊
ဆောင်ကျဉ်းပေးပါမယ် ဆိုတာမျိုးကို ပြည်သူ များအားအမြဲတစေအသိပေးနှိုးဆော်နေကြရမှာ မဟုတ်ပေဘူးလား ?
ထို့အတူ အစိုးရ၏ အားနည်းချက်ဟုယူဆသည့် အချက်၊အခြေအနေများကိုလည်း အကြံပြု သုံးသပ်ဝေဖန် ကြကာ တိုင်းပြည်အတွက်
ပိုမိုသင့်တင့် ကောင်းမွန်သည့် နည်းလမ်းများကိုလည်း ချပြနေကြရမှာမဟုတ်ပါလား ?
အစိုးရကို ပုတ်ခတ် အပုတ်ချခြင်း၊
မိမိတို့ နိုင်ငံအတွက် ပိုပြီးထိရောက် ကောင်းမွန်မည့် အပြောအဆို အခင်းအကျင်းကို ဖန်တီးယူကြရမည့် ခေတ်ကာလကို ရောက်ရှိနေပါပြီလို့ မြင်ပါတယ်၊
လက်ရှိ အစိုးရက ဖွဲ့စည်းပုံပေးထားချက်အရ ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီ နိုင်ငံရေးပါတီများထူထောင်ခွင့်ကို ပြည့်ပြည့် ဝဝပေးထား တာကိုလည်းတွေ့နေကြရပါတယ်၊
ဒါက နိုင်ငံသားတိုင်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် နဲ့ ရယူပိုင်ခွင့် ဖြစ်ပါတယ်၊
ယခုအခါမှာ (၂၀၂၀) အထွေထွေရွေးကောကက်ပွဲကို အခက်အခဲတွေကြားမှ လုပ်ဆောင်
ရပြီး၊ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ပြဌာန်းထားသည့်ဥပဒေများနဲ့အညီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုခွင့်
တစ်ချို့တောင်းဆိုချက်တွေက အစိုးရက အလွယ်တကူ ပေးလို့မရနိုင်တာတွေလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ရွေးကောက်ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ ပြဌာန်းထားချက် အရသာဆောင်ရွက်ပေးရမည့် ကိစ္စတွေရှိပါတယ်၊ဆိုသည်ကိုလည်း နိုင်ငံရေးပါတီများကသိထား သင့်ပါတယ်၊
သို့မို့ကြောင့် တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်ပြီး ကောင်းမွန်မည့် အချက်တွေကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာ ပယ်ဖျက်၊ပြင်ဆင်၊ထည့်သွင်းဖြည့်စွက်နိုင်စေရန်လည်း အားလုံးမှ ညှိနှိုင်းကြိုးစားကြဘို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်၊
ထူထောင်လိုသူ ၁၅ ယောက်က ပြည်ထောင်စုကော်မရှင်ထံ တင်ပြအကြောင်းကြားမူကို လုပ်ထုံးနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ပါက နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ် ထူထောင်ခွင့် ရပါတယ်၊
ထူထောင်ခွင့် ရပါက ကျပ်ငွေ သုံးသိန်း သာလျှင်ပေးဆောင်ကြရပါတယ်၊မိမိတို့နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ရပ်ထူထောင်ဘို့ဆိုတာ အလွန် လွယ်ကူလှပါတယ်၊
သို့သော်လည်း တိုင်းပြည်ကို မိမိတို့ရဲ့ မူဝါဒများဖြင့် အုပ်ချုပ်စီမံ မူပြု ကြမည့် နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ရပ်ထူထောင်မှာဖြစ်ပါ၍ ထူထောင်လိုသူများ၏ ကိုယ်ရေး ရာဇဝင်ကိုတော့အခြေအနေတစ်ခုအထိ စုံစမ်း မှတ်တမ်း တင်ထားရမှာက နိုင်ငံမှတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ တာဝန်နဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်၊
ဒါကို နားလည်လက်ခံ အသိအမှတ်ပြုပေးထားကြရပါမယ်၊
လူထုထောက်ခံလာအောင် ကြိုးစားကြရမှာက နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ တာဝန်ဖြစ်သလို၊
ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ရန် ကြိုးစားကြရမှာက
၎င်းနိုင်ငံရေးပါတီများ၏ မဖြစ်မနေ လုပ်ကြရမည့် တာဝန်များမဟုတ်ပါလား ?
ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးပါသောကြောင့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှ ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မူက အင်မတန် အရေးပါ ပါတယ်ဆိုသည်ကိုလည်း သိထားကြဘို့ လိုအပ်ပါတယ်၊
ထူထောင်လိုသူ ၁၅ ဦး၊ကျပ်ငွေ သုံးသိန်း၊တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုပါက ပါတီဝင် တစ်ထောင်(၁၀၀၀)ဦးရေ၊ဒေသနယ်တစ်နယ်ထဲဆိုပါက ပါတီဝင် ငါးရာ(၅၀၀) ပြနိုင်ပါက နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်အဖြစ် ရပ်တည်ခွင့် ရှိပါကြောင်းကို ဥပဒေအရ ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်၊
အကယ်၍ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တစ်ယောက်မှ အနိုင်မရပါက ပါတီ၏ ရပ်တည်နိုင်ခွင့် ဘယ်လို ရှိရမည် ဆိုသော ဥပဒေ ပြဌာန်းထားခြင်းမရှိတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်၊
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုမှာတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တစ်ဦးမှ အနိုင်မရကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေက အလိုလိုရပ်သွားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်၊
ပြည်သူများ၏ မဲပေးထောက်ခံမူကသာလျှင် အခရာကျ ပါတယ်၊
တပ်မတော် အစိုးရ လက်ထက်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီ (၂၄၈ ) ပါတီ ရှိခဲ့ပြီး၊
ရွေးကောက်ပွဲမဝင်တဲ့ပါတီများကို ဖျက်သိမ်းတဲ့ ဥပဒေ ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့ပါ၍ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ သည်ပါတီက မိမိအမှတ်မမှားပါက (၉၃ ) ပါတီသာ ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊
သို့သော် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ တစ်ယောက်မှ အနိုင်မရခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရသည့် ဥပဒေ တစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုလည်း မှတ်မှတ်ရရ ရှိခဲ့ပါတယ်၊ဤတွင် အနိုင်ရပါတီ (၁၀ ) ပါတီသာ ကျန်ရှိခဲ့ တာကိုလည်း မှတ်သားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ် ဆိုတာက လူထုထောက်ခံမူ နည်းရင်တောင်မှ များလာစေရန် မိမိတို့၏ တာဝန်ယူမည့် မူဝါဒများကို ချပြရင်း ထောက်ခံမူများ မြင့်တက်လာစေရန် ဖြောင့်မတ်စွာ ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပြီး၊
အကယ်၍ မိမိတို့ ပါတီကို လူထုကမထောက်ခဲံပါဘဲ၊မုန်းနေပြီဆိုပါက ဘယ်လိုများ လုပ်ကြရမှာလည်း ဆိုတာကို စဉ်းစားကြစေခြင်ပါတယ်၊
၁၉၉၀ မှ ၂၀၁၀ အခင်းအကျင်းနဲ့ ယခု ၂၀၁၀ မှ ယခုကာလ အထိအခင်းအကျင်းအခြေအနေက လုံးဝ မတူတော့ပါဆိုတာကိုလည်း၊နိုင်ငံရေးပါတီများက သုံးသပ် သတိထားနိုင်ကြဘို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်၊
ပြည်သူ ပြည်သားများ၏ လိုက်ပါမူ အခြေအနေလည်း မတူတော့ပါဘူး၊နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်ထူထောင်ပြီး၊ဒေသတစ်ခုက လူမူရေးအဖွဲ့လောက်တောင် မလုပ်ပါက၊မလုပ်နိုင်ပါက ပြည်သူများ၏ အားကိုး ရွေးချယ်မူက ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်ပါသလဲ ?
မိမိတို့နိုင်ငံ၌ နိုင်ငံရေးပါတီ ဖေါင်းပွမူက အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလား ?
ဟုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၃၃၇)၊တွင်ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားသော နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက် အရေးပါသည့် အင်စတီကျူးရှင်း
ဖြစ်သော တပ်မတော်နှင့်နိုင်ငံရေးအုပ်စုဖွဲ့ကာ ယခင်ကာလများ၌နိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူခဲ့ပြီး၊လုပ်နည်းပေါင်းများစွာဖြင့်ငွေကြေးချမ်းသာသော နိုငံရေးပါတီများနှင့် ငွေကြေးသော်လည်းကောင်း၊အခြားအခွင့်အလန်းသော်လည်းကောင်းရယူလိုသော နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ တိုင်းပြည်အတွင်း နိုင်ငံရေး Issue အမျိုးမျိုးဖြင့် တရားလက်လွတ် ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းကြ၍၊
ယခုအခါတွင် မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်း ပြည်သူများမှရင်ဆိုင်နေရသော အခင်းအကျင်းအသစ်
တက်လာသော အနိုင်ရပါတီ အစိုးရက တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်ဘို့အချိန်ထက်၊၎င်းအုပ်စုများ၏ ဗရမ်းပတာ ဥပဒေမဲ့ပြောဆို လုပ်ဆောင်မူများကို ဖြေရှင်းနေရသောအချိန်က များနေသလိုဖြစ်ရပါတယ်၊
မိမိတို့တိုင်းပြည်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ထူထောင်ရေးနှင့်တိုင်းရင်းသားအားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်သည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆီသို့ သွားနေသည့်ခေတ်ကာလအချိန်ဖြစ်နေပါသောကြောင့်၊နိုင်ငံတကာမှ တိတိကျကျ၊ခိုင်ခိုင်မာမာ ထောက်ခံအသိအမှတ်ပြုထားသည့်၊အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပြီး၊
မိမိတို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူ (၇၀)ရာခိုင်နူန်းကျော်မှ ဆန္ဒမဲပေးထားကြမူများအား၊
ပြည်သူများက အလေးထားသော တပ်မတော်သည် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်၊ရလဒ်များအား ရန်လိုမူများကို ရပ်သင့်ပါပြီ၊တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်သော ထုတ်ပြန် ပြောဆိုမူများသည်၊
ဟု ဖွဲ့စည်းပုံ ပုဒ်မ(၂၀)(စ) ၏ ဖွင့်ဆိုချက်အား ဖေါက်ဖျက်ကျုးလွန်မူသာဖြစ်ပါတယ်၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ပုဒ်မ(၃၉၈)နဲ့အညီဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးထားသော ပြည်ထောင်စုအဆင့်လွတ်လပ်သော လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၊
အညီပြဌာန်းထားသည့် လွှတ်တော်များရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်အညီဆောင်ရွက်နေသည့်၊
ပုဒ်မ(၉၇)(၁) အရလည်း၊နည်းဥဒေ၊စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ထုတ်ပြန်ခွင့်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှအပ်နှင်းထားပါသော၊ပြည်ထောင်စုအဆင့် လွတ်လပ်သောပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊လုပ်ငန်းအဖွဲ့အား ထုတ်ပြန်၊ပြောဆိုမူ၊လုပ်ရပ်များသည်၊ယနေ့တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အပြင်သို့တစ တစ ရောက်ရှိလာပြီး၊ဖွဲ့စည်းပုံပြဌာန်းချက်များ၊တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် မညီပါပေ၊
သို့ပါ၍ တပ်မတော်၏ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ရပ်များသည် မိမိတို့
နိုင်ငံအား နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မူများဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပြီး၊ဆန္ဒမဲများပေးကြပါသော တိုင်းရင်းသား
မိဘပြည်သူများမှ စိတ်လက်မချမ်း မသာ ဖြစ်နေကြရပါတယ်၊
ယခုအခါမှာလည်း (၂၀၂၀)ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၈)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သည့် တတိယ
အကြိမ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်၊ လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက်
(၃၁.၁၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ၊ပြည်ထာင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးဖြစ်ပါတယ်၊
သို့ဖြစ်ပါသော အကြောင်းအချက်၊ဖြစ်စဉ်များအား ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြပြီး၊ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေများနဲ့သက်ဆိုင်သော အပြစ်ရှာကြံ၊ဂွတိုက်နေမူများ၊လုပ်ဆောင်နေမူများအား၊တပ်မတော်တာဝန်ရှိကြသူများက ရပ်တန့်ဘို့လိုအပ်ပါပြီ၊မိမိတို့နိုင်ငံကို မိမိတို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံးမှ စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်တည်ဆောက်၊ပြုပြင်ကြရပါတော့မယ်၊
အပြန်အလှန် အငြင်းပွား၊တိုက်ခိုက်မူသည် မိတို့နိုင်ငံအတွက် အလုပ်မဖြစ်နိုင်တော့ပေ၊
အငြင်းပွား၊တိုက်ခိုက်မူများကိုသာ ဆက်လက်ဖန်တီးနေပါက၊ နိုင်ငံတကာမှ အထင်သေး၊အမြင်သေးဆက်ဆံလာ၍ တိုင်းပြည်လည်း နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မူများဖြင့်သာစခန်းသွားနေမြဲ၊သွာနေရပြီး၊ဆင်းရဲတွင်းမှ တက်မှာမဟုတ်တော့ပေ၊လေးနက် တည်ကြည်သော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမူများဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ အရေး အရာအားလုံးကို ပူးပေါင်းစွမ်းဆောင်ခြင်းသည်သာ မိမိတို့
ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည့် နည်းလမ်းပင်ဖြစ်ပါတယ်၊
ထိုသည်ကိုလည်း လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် အထိုင်ကျနေပြီးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံများစွာက တွေ့ ကြုံရင်ဆိုင်လာခဲ့ ကြရပြီး၊ပြည်သူ ပြည်သားများ၏ ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မူကသာ တစ်ဖြေးဖြေး အတည်တကျ smat ဖြစ်လာတာကို လေ့လာရပါတယ်၊
တစ်ခါတလေမှာ အစိုးရဆိုတာ မြေပြင်အခြေအနေကြောင့်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်း အပြည့်မလုပ်နိုင်တာရှိကောင်းရှိတတ်ကြပါတယ်၊
ဥပမာ – ယနေ့အချမ်းသာဆုံးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Federal government သည်
ဒီဇင်ဘာလအတွင်း လူဦးရေသန်း(၂၀) ကို
Covid ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးဖြစ်နေစေရမည်ဟု ပြောခဲ့သော်လည်း၊ နှစ်ဒသမရှစ်သန်း (၂•၈) သန်းကိုသာ ထိုးနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ကြရမှာပါ၊
သို့ပေမယ်လို့ ပြည်သူနဲ့အတူ ရွေးချယ်ခံအစိုးရဆိုတာ ဖေးမကူညီ လက်တွဲသွားကြရမှာမဟုတ်ပါလား၊